लारालाई जब अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने– क्रिकेटका ‘माइकल जोर्डन’
काठमाडाैं, May 03, 2020
अग्नेस साइरस अहिले पनि अतीत सम्झेर रोमाञ्चित हुन्छिन्। ब्रायन चार्ल्स लाराकी यी जेठी दिदी विगत सम्झदै भन्छिन्, ‘हाम्रो ११ सदस्यीय परिवार, तीन बहिनी र सात भाई। कान्छो छोरा हुनु नै लाराका लागि सौभाग्य थियो।’
लाराको बलियो इच्छाशक्तिबाट उनी अहिले पनि सबैभन्दा बढि प्रभावित छिन्। फुच्चे हुँदा लाराले लिएको अठोट अहिले पनि बिर्सन सकिरहेकी छैनन्।
‘ऊ त्यति बेला ७ बर्षको थियो। पुड्के अनि दुब्लो। उसको हातमा आफूभन्दा ठूलो ब्याट हुन्थ्यो। एकदिन ऊ मेरो अगाडी उभियो। र, भन्यो– म पहिले विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर बन्न चाहन्छु। त्यसपछि प्रशिक्षक।’
लाराले दिदीसँग गरेको त्यो वाचा त्यतिबेला पुरा गरे, जब उनले सन् २००४ मा एन्टिगोआमा भएको इङ्ल्यान्डविरुद्धको अन्तिम टेस्टमा अविजित ४ सय रन बनाए। त्यो इनिङपछि लारा आधुनिक टेस्ट क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाका स्वर्गीय सर डोनाल्ड ब्रेडम्यान पछि सफल ब्याट्सम्यानका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भए। एन्टिगोआको पोर्ट अफ स्पेन लाराको सवभन्दा प्रिय मैदान हो। उनले यही मैदानमा सन् १९९४ मा टेस्ट क्रिकेटको एउटै इनिङमा उच्च योगफल बनाउँदै पहिलो पल्ट कीर्तिमानी ३ सय ७५ रन बनाएका थिए। उनको यो कीर्तिमान सन् २००३ मा जिम्बाबेविरुद्ध अस्ट्रेलियाका म्याथ्यु हेडनले ३ सय ८० रन बनाउँदै तोडेका थिए। लाराले त्यसको तीन बर्षपछि नै एन्टिगोआमा ४ सय रन बनाउँदै यो कीर्तिमानलाई फेरि आफ्नो नाममा लेखाए। टेस्ट क्रिकेटमा अहिले पनि यो कीर्तिमान उनकै नाममा छ।
सान्ता क्लोजको हरित बस्तीमा रहेको पोर्ट अफ स्पेनदेखि केही बाहिर कान्तरो गाउँमा ५१ बर्षअघि (२ मे, १९६९)लाराको जन्म भएको हो, कृषि स्टोरेजका म्यानेजरको घरमा। लामो समय बेलायती साम्राज्यको उपनिवेश रहेको ट्रिनिडाड एन्ड टोबाकोका स्थानीय वासिन्दा अहिले पनि लारालाई इश्वरीय बरदान भन्न रूचाउँछन्।
उनीहरू विश्व प्रसिद्ध अश्वेतव्यक्ति मोहम्मद अली, पेले, मार्टिन लुथर किङसँग लाराको तुलना गर्छन। र, भन्छन्– ‘उनलाई भगवानले नै क्रिकेट खेल्न पठाएका हुन्।’
वेष्ट इन्डिजका पूर्व प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान माइकल काेर्नाड कारेयु, जाे जाेए कारेयुकाे नामले क्रिकेटमा चिनिन्थे, उनी ट्रिनिडाडका बासिन्दाको यो विश्वासलाई सत्य मान्थे। ‘यो कुरा सत्य हो’, सन् २०११ मा मृत्युवरण गरेका उनी भन्ने गर्थे– ‘लारा क्रिकेट खेल्नकै लागि जन्मिएका हुन्।’ टेस्ट क्रिकेटमा लाराले बनाएको कीर्तिमानको चर्चा गर्ने हो भने कारेयुको यो भनाईसँग सहमत हुने धेरै ठाउँ छ।
सन् १९९४ मा पहिलो श्रेणी क्रिकेटमा एउटै इनिङमा बनाएको ५ सय १ रनको कीर्तिमानलाई फर्किएर हेर्ने हो भने लारालाई कीर्तिमानी ब्याट्सम्यानको उपमा दिँदा फरक पर्दैन। लाराले वर्विकसायरबाट इङ्ल्यान्डमा काउन्टी क्रिकेट खेल्दा त्यसबेला डरहमविरुद्ध विशाल ५ सय १ रन बनाएका थिए। यो कीर्तिमान अहिलेसम्म कसैले भंग गर्न सकेको छैन।
कारेयु लारा परिवारका अभिन्न अंग थिए। सन् १९८९ मा लाराको पिताको देहवसानपछि कारेयुले नै उनको हेरविचार गरेका थिए। लारा आफ्नो बाबुको निधन हुँदा २० बर्षका थिए। उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाइला टेक्न अविभावकको आवश्यकता थियो, जसलाई पछि पुरा गरे कारेयुले नै।
‘ऊ सानैदेखि मेरो परिवारसँग गाँसिएको थियो। त्यसैले मेरो कर्तब्य पनि थियो’, सानै उमेरदेखि लारालाई क्रिकेटमा सम्मोहित गरेका कारेयुले मर्नुअघि दिएकाे अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– ‘ऊ मेरो दुई छोरा माइकल र डेभिडसित ट्रिनिडाडको फातिमा प्राइमरी स्कुलमा पढ्थ्यो। र, साइकल पेलेर क्रिकेटको पुरानो भिडियो रेकर्डिङ हेर्न मेरो घर आइपुग्थ्यो।’
उनि भन्ने गर्थे– ‘ओजश्वी मस्तिष्क! त्यतिबेला पनि क्रिकेट बारे अकाट्य तर्क गर्थ्याे। उसमा एउटा विशेषता छ, ऊ नरम छ। र, लामो समय धैर्यका साथ अरुको कुरा सुन्न सक्छ। यसले नै उसलाई महान् खेलाडी बनाएका हो।’
लारा तीन बर्षको हुँदा दाजु रुडोल्फले पहिलोपल्ट उनलाई काठको सानो ब्याट उपहार दिएका थिए। क्रिकेट ब्याटसँग उनको पहिलो साक्षात्कार त्यही थियो। ‘ऊ त्यतिबेला पनि फूलको कोपिला र सानो ढुंगालाई बल बनाएर हिर्काएर बस्थ्यो’, लाराकी दिदी साइरस सम्झन्छिन्,‘उसको क्रिकेटमोहकै कारण मैले ऊ ६ बर्षको हुँदा राम्रो काेचिङमा पठाउने निधो गरिसकेकी थिएँ।’
लाराको जीवनको ठूलो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ यसैलाई ठान्छिन्, साइरिस। ‘संयोग नै मानौं। त्यतिबेला हार्वर्ड क्लिनिकले पत्रिकामा एउटा विज्ञापन छापेको रहेछ, क्रिकेट प्रशिक्षण लिन इच्छुक किशोरहरूले तुरुन्त सम्पर्क राख्नुहोला भन्दै। मेरो आँखामा त्यो विज्ञापन पर्‍यो। मैले समय गुमाइनँ, तुरुन्त लारालाई लिएर गएँ,’ साइरिस सम्झन्छिन्, ‘सुरुका दुईवटा आइतबार औंला समातेर प्रशिक्षण स्थल पुर्याएको हिजोजस्तै लाग्छ। सानो हरियो टोपी, क्रिकेट खेल्ने सादा पोसाक र एउटा गतिलो ब्याट किनिदिएकी थिएँ।’
६ बर्षको उमेरदेखि लाराले क्रिकेट खेल्दै आएको देखेका हार्वर्ड क्लिनिकका प्रशिक्षक हयुगो डे आफूले प्रशिक्षण दिएका किशोर क्रिकेट खेलाडीहरूमा लाराजस्तो प्रतिभावान ब्याट्सम्यान अहिलेसम्म नपाएको बताउँछन्।
वेष्ट इन्डिजका महान खेलाडी सर गारफिल्ड सोवर्सले पहिलोपल्ट लारालाई सन् १९८७ मा भेटेका थिए। वेष्ट इन्डिज, क्यानडा र इङ्ल्यान्डका स्कुले खेलाडीबीच बारबोडसमा भएको एक प्रतियोगितामा प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याइएका सोवर्स पहिलो भेटमै लाराको व्याटिङ शैलीबाट मुग्ध भइसकेका थिए। उनले त्यतिबेलै टिप्पणी गरेका थिए, ‘लामो समयपछि मैले एउटा अत्यन्तै प्रभावशाली खेलाडीसँग भेट्ने मौका पाएँ।’
१६ बर्षको उमेरमा लारालाई निखारेका अर्का प्रशिक्षक फ्रान्सिस्को गार्सिया लारा कीर्तिमानी ब्याट्सम्यान बन्नुमा उनको बलियो इच्छाशक्ति कारण भएको बताउँछन्। ‘पत्याउनुहुन्छ, मैले उसलाई कहिल्यै सिकाउनुपरेन। ऊ अभ्यासमा व्यस्त हुँदा, म अम्पायरिङ गरिरहेको हुन्थेँ। उसको ब्याटिङ शैली कति सालिन हुन्थ्यो भने, लाचार भएर स्टम्पबाट उसको ब्याटिङ नियाल्नेबाहेक मेरो अरू काम हुँदैन्थ्यो,’ गार्सिया भन्छन्।
महान ब्याट्सम्यान अस्ट्रेलियाका सर ब्रेडम्यान युवावस्थामा स्टम्प र गल्फको बलले ब्याटिङ अभ्यास गर्थै। त्यस्तै, वेष्ट इन्डिजका सोवर्स स्टम्प र टेनिस बलले। तर, लारा स्कुले जीवनमा ‘स्केल र काँचको सानो गोलो ढुंगाले ब्याटिङको अभ्यास गर्थे। अभ्यासमा विशेष सट हिर्काउन असहज अनुभव भयो भने उनी नेट्समा तारको मद्दतले बल झुन्ड्याएर घन्टौं अभ्यास गर्थे। ‘एकचोटी ऊ तीन घन्टा एउटै दिशामा बल हिर्काइरहेको थियो,’ गार्सिया सम्झन्छन्।
लाराले ट्रिनिडाड एन्ड टोबाको टोलीमा रहँदै १४ बर्षको किशोरअवस्थासम्म स्ट्राइकरको भूमिकामा फुटबल पनि खेले। सानोछँदा उनी इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिसकेका पूर्वस्टार खेलाडी डुइट्यार्कसँग फुटबल खेल्थे। तर, उनले चाँडै फुटबल परित्याग गरी क्रिकेटलाई लक्ष्य बनाए।
प्रारम्भमा लारालाई क्रिकेटमा समर्पण हुन दिदी साइरसले मद्दत गरे पनि पछिल्ला दिनमा परिवारका सबै सदस्यले उत्तिकै प्रोत्साहन गरे। ‘ऊ सन् १९९४ मा सर गारफिल्ड सोर्वसको कीर्तिमान भंग गर्दै ३ सय ७५ रन बनाउँदा निकै भावविह्वल भएको थियो। ऊ यो उपलब्धि बुवालाई देखाउन चाहन्थ्यो’, साइरस भन्छिन्।
सन् १८८९ सम्म उनका बुवा बन्टीले कान्छो छोराका सबै खेल मैदानमै गएर हेरेका थिए। साइरस आफ्नो भाइको उपलब्धिमा गर्व गर्छिन्। र, भन्छिन्, ‘अब मलाई ऊ प्रशिक्षक भएको हेर्न मन छ।’
लाराले सन् २००६ मा पाकिस्तानविरुद्ध अन्तिम टेस्ट खेल्दै टेस्ट क्रिकेटबाट सन्यास लिए। उनले त्यसको एक बर्षपछि इङ्ल्यान्डविरुद्ध खेल्दै एकदिवसीय क्रिकेटबाट पनि सन्यासको घोषणा गरे।
सन् २००९ मा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रपति हुँदै ट्रिनिडाडा एन्ड टोबाकोको भ्रमण गर्ने क्रममा सार्वजनिक समारोहमै सोधेका थिए, ‘लारा कहाँ छन्? म उनीसँग भेट्न चाहन्छु।’ उनले त्यतिबेलै लारालाई क्रिकेटको ‘माइकल जोर्डन’ को संज्ञा दिएका थिए।
– एजेन्सीहरुको सहयोगले
प्रकाशित मिति: May 03, 2020 17:18:17
चेन्नाईकाे राेमाञ्चक जितमा रायुडू र डु प्लेसिसकाे अर्धशतक
आईपीएल आजबाट, उद्घाटन खेलमा मुम्बई र चेन्नई भिड्दै
क्रिकेटर भण्डारीको उपचारका लागि सहयोग जुट्ने क्रम जारी
चेन्नई सुपर किंग्सले धोनीलाई दियो सुनको टोपी, जडेजालाई सुनको तरवार
क्रिकेटर भण्डारीको मुख्य शल्यक्रिया सफल, अवस्था स्थिर
म्याक्सवेल र केरीको उत्कृष्ट शतकमा अष्ट्रेलियालाई उपाधि
क्रिकेटर ललितको उपचारमा राखेपले सहयोग गर्ने, उपचार सुधारोन्मुख